Maxaa sababay nidaam-darrada ka jirta dalka Liibiya? - BBC News Somali
Dalkani saliidda qaniga ku ah, oo marin muhiim ah u ah kumannaan muhaajiriin ah oo u safraya dhinaca Yurub, ayaa xilliyadii hore ayaa waddanka ugu wanaagsan dhanka nolosha ee qaaradda Afrika, waxaana dadka dalkaasi ay heli jireen daryeel caafimaad iyo waxbarasho lacag la'aan ah.
Maamulka ka dhisan Tripoli ee caalamku aqoonsan yahay ayaa ah mid ka mid ah dhinacyada isku haya xukunka dalka. Dolwaddani ayaa waxaa hoggaamiyo ra'iisalwasaare Fayez Sarraj oo ah nin injineer ah. Sarraj waxa uu Tripoli yimid bishii Maarso ee sanadkii 2016, afar bilood uun ka dib markii lagu heshiiyay in la dhiso dowlad midnimo qaran.
Qaar ka mid ah maamulkaasi Tobruk ayaa waxay qabaan aragti ah in Janaraal Xaftar uu u hamuun qabo inuu noqdo "Sisi-ga Liibiya", taa oo ay ula jeedaan Janaraal Cabdulfataax Al-Sisi, oo inqilaab ku qabsaday awoodda waddanka deriska ah ee Masar.
Waxay ka mideysnaayeen nacaybka Qadaafi - laakiin wax kale ma jirin. Ma jirin koox kaliya oo mas'uul ka ah kacdoonka ka jiri waddankaasi. Maleeshiyaadka ayaa waxa ay ka dagaalamayeen magaalooyin kala geddisan, waxa ayna u dagaalamayeen danahooda.
Waxay sidoo kale u kala duwan yihiin mabaa'diida- qaarkood ayaa ah mintidiin ama Muslimiin qunyar-socod ah, qaar kale ayaa ah gooni u goosad ama kuwa doonaya xukun boqortooyo, halka kuwo kale ay yihiin kuow aragti furan. Intaas waxaa dheer, malleeyshiyaadka waxaa lagu kala qaybiyaa xarumo goboleed, qowmiyado iyo maxaliga ah, taas oo ka dhigaysa isku dhafan dabacsan.
Waxa uu jahawareerka Liibiya qayb ahaan ku eedeeyay ra'iisalwasaarihii Ingiriiska ee xilligaasi David Cameron oo uu sheegay in uusan wax weyn ka caawin waddankaasi Liibiya ee ku yaal woqooyiga Afrika.
Janaraal Xaftar wuxuu in dhawaale awood u yeeshay in uu taageero ka helo qaar ka mid ah kooxaha iyo qabaa'ilada hubeysan, gaar ahaanna koonfurta dalkaasi, si ay uga barbar dagaalamaan, waxa uuna magaalooyinka yar yare e galbeedka dalkaasi ka sameystay xulufo hubeysan oo muhiim ah.
Balse kooxo hubaysan oo ka dhisnaa magaalada Misrata iyo gobolka bartamaha ee dalkaasi oo xilligaasi daacad u ahaa xukuumadda midnimada qaran, ayaa waxay magaaladaasi ka saareen kooxda Daacish bishii Agoosto ee sanadkii 2016 - iyaga oo taageera ka helaya reer galbeedka iyo Mareykanka.